Sida loo isticmaalo / loo soo saaro eray sir ah oo aad u ammaan badan | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo isticmaalo / loo soo saaro eray sir ah oo aad u ammaan badan
Kuwo badan ayaa laga yaabaa inay ii kala saaraan sidii qof maskax ama maskax amni, laakiin markii aad koonto ku leedahay daraasiin bog, kama aqaano adiga adiga laakiin waxaan ka walaacsanahay in koontooyinkan oo dhami ay leeyihiin hal eray isku mid ah ... waxaan u arkaa inay tahay is dil HAHA .
Dhibaatadu waxay tahay abuurista illaa 50 lambar sir ah oo kala duwan, oo aan midba midka kale xiriir la lahayn ama wax la mid ah, halkan ayaa ah meesha aan ku dhego, maxaa yeelay ma haysto hal-abuur igu filan haha.
Iyo ... mahadsanid Tux in matoorrada furayaasha la hindisay invent
Markan waxaan kaaga sheegi doonaa midka aan isticmaalo: pwgen (magaceeda waxaa loola jeedaa: matoor furaha ama matoor furaha)
pwgen Waxay ku jirtaa keydinta meelaha ugu caansan, si loogu rakibo Archlinux waxaan si fudud u dhigay:
En Debian ama deriska, a:
Isticmaalkeedu waa wax fudud runtii, waa inaad furtaa terminal oo ku qor «pwgen»(Xigashooyinka la'aan) iyo voila, waxaa si otomaatig ah loo tusi doonaa erayga sirta ah ee si kadis ah loo sameeyay generated
Laakiin tani maahan dhammaan, pwgen Waxay leedahay dhowr ikhtiyaar oo loo adeegsan karo, haddii aad rabto ... si aad uga dhigto furaha sirta ah ee la soo saaray kuwo ammaan ah (dhib badan) 😉
Si kale haddii loo dhigo, haddii ay kaliya qorayaan «pwgen»(Calaamado aan oraah lahayn) waxay soo saari doonaan furayaal sir ah oo ay ku qoran yihiin xarfaha hoose iyo hoose iyo sidoo kale lambarro, laakiin haddii ay qoraan«pwgen -y»(Xigashooyinka la'aan) waxaa lagu dari doonaa marka lagu daro kan, astaamaha dhifka ah.
Maaddaama sawir had iyo jeer sharrax ka wanaagsan qoraalka oo keliya, waxaan uga tagayaa bannaanbaxa halkan:
Sida aad u arki karto, sax quruxsan sax? 😀
Hada, qeybta ku saabsan halka aan ku xafido furayaashan sirta ah waa la waayi lahaa, maxaa yeelay waa wax aan macquul aheyn in la xasuusto? … Laakiin taasi mar horeba waa qormo kale HAHA, wax uun baan kuu sheegayaa: «keepassx»😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Sida loo isticmaalo / loo soo saaro eray sir ah oo aad u ammaan badan
Waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta saaxiib, waxaan arkaa inaad sii wado abuurista shaki ... hahahahaha.
HAHAHAHAHAHA haba yaraatee, wali ma garanaysid sida khaldan ee aan u noqon karo HAHAHA, iyo ... hehe yep, waxaan hayaa wax badan oo aan qoro, waa uun inaan si fudud u mashquuliyey 🙁
Ma aanan aqoon amarkaas, oo aad u faa'iido badan oo si sahlan loo isticmaali karo!
In kastoo adeegsadayaasha KeePassX, waxa ugu badbaado badan ayaa ah inay adeegsadaan matoorkooda furaha u gaarka ah.
Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaalaa kudar, labadaba firefox iyo chrome iyo derivatives, maadaama dhammaan marinka aan adeegsado ay ku jiraan internetka XD
Waxaa loo yaqaan 'lastpass' waxayna leedahay labadaba matoor sir ah iyo jirrid si loo wada xusuusto dhammaantood, xitaa waad awoodi kartaa buuxinta foomamka, iwm.
Waxaan ku dhaafayaa bogga halkan: https://lastpass.com/
Waxay igu habboon tahay sida galoofyada, furayaasheyda sirta ah ayaa u qalma likaha.
HAHAHA Xitaa kuma sheegayo, xitaa haddii aanan haysan PayPal ama wax la mid ah ... Waxaan u arkaa furaha furahayga oo dhan mid aad u muhiim ah
Nin yahow, akoon kuma lihi meelkasta, laakiin sameynta isla erayga sirta ah ma iloobo
Ku saabsan Google, Monopoly-keeda, alaabteeda iyo arrimo kale
Sida loo nadiifiyo keydka loona soo cesho MBs-ka RAM